चाइनिज कम्पनीले बनाउने भयाे भेरी-बबई बाँध, आयोजना र कम्पनीबीच सम्झौता
Sun, Dec 8, 2019 at 12:39pm
काठमाडाैं, १५ साउन ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणले दोस्रो चरणको कार्य अघि बढाउने भएकाे छ । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्यको लागि आयोजना तथा चाइनिज कम्पनीबीच सम्झाैता भएकाे छ ।
चाइनिज गुवाङडुवाङ्ग युएनटिएन इन्जिनियरि कंपनी– रमण जे.भी बिच सम्झौता भएको हाे । प्राविधिक परिक्षणमा ५ वटा निर्माण कम्पनी छनौटमा परेपछि खोलिएको आर्थीक प्रस्तावनामा समेतमा ५ बटै निर्माण कम्पनी छनौट भए ।
चाइनिज कम्पनी गुवाङडुवाङ्ग युएनटिएनले स्वदेशी कम्पनी रमण कन्ष्ट्रक्सनसँग जेभी गरि आयोजनाको निर्माण गर्न लागेको हो । ३३ अर्ब १९ करोड लागत अनुमान गरेर काम अघि बढाइएको भेरी बबईआयोजना अन्तर्गत भेरी नदिको पानिलाई बबइ नदिमा डाइभर्सन गरि करीब ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाई गर्नुको साथै ४६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।
जसमा ग्वाँङ्डङ युएनटिएन इन्जिनियरिङ कम्पनी र रमण जेभीले सबैभन्दा कम ६ अर्व १६ करोडमा आफनो प्रस्तावना हालेको थियो ।
आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत हाइड्रोपावरसँग सम्बन्धीत संरचना हेडवर्कस्, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक, पावरहाउसको संरचनाहरु निर्माण हुने छन् । नदिमा छ ओटा ढोकासहितको बाँध निर्माण गरिने छ । उक्त बाँध १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो रहने छ ।
आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य आ.व. २०७९/८० मा सक्नेगरि करिब नेपाली रु. ६ अरब १६ करोड अरबमा सम्झौता भएको छ ।
दोस्रो चरण अन्तर्गतको निर्माण कार्यको जिम्मा पाएको चिनिया कम्पनी गुवाङडुवाङ्ग युएनटिएन इन्जिनियरिङ्ग कम्पनीले यस अघि चिनको १९ वटा प्रान्त लगायत ८ वटा भन्दा बढि अन्य देशमा विभिन्न हाइड्रोपावर, रेल ट्रान्जीट , इलेक्ट्रीक पावर लगायतको आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।
यो आयोजनाबाट बार्षिक करिब ४ अर्ब ३ करोड बराबरको बिजुली उत्पादन गरीनेछ । साे आयोजनालाई प्रदेश नं ५ र प्रदेश नं ६ को आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको छ । बाँके र बर्दियाको करीब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ याे आयोजना सुरू गरिएको थियाे ।